Gegada Diyaaradaha ayaa la dhaqaaqay, Muxuu ahaa Fate of Shaqaalaha? Waxaa sharxay TAV iyo İGA | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGaroonka Moved, Maxaa ku dhacay masiirka shaqaalaha? TAV iyo IGA ayaa la filayaa
16 / 04 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
madaarka ayaa loo wareejiyay qaddarka shaqaalihii ka dhacay bariga waxana la filayaa in ay sharxaan
TAV Airport, oo ka shaqeeya Garoonka Ataturk, 3.Havalimani sababtoo ah dib u dejinta qiyaastii shaqaalaha 4500 ayaa la eryey.
Dhinaca kale madaxa guddiga fulinta ee shirkada 3.Havalimani ayaa sheegay in ay heshiis la galeen IGA, qayb ka mid ah heshiiskaan waxaa loo wareejiyay shaqaalaha IGA.
Bishii Nofembar ee sannadkii hore Waxaan ku jirnaa gadaasha madaxda Shabakadda ayaa ku dhawaaqday in TAV diyaarinayay in ka badan hal kun oo shaqaalaha 5 ah ee garoonka Atatürk inta lagu guda jiro habka dejinta. Hay'adda TAV Corporate Communications Directorate ayaa cambaareeysay ogeysiinta ay u dirtey e-mail si ay u dirto Bogga News Portal, kaas oo soo gudbiyay diyaarinta qorshaha ka eryidda Bosses Network, waxayna ku eedeeyeen Shabakadda Bosses Network in ay waxyeeleeyaan sumcada shirkadda.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska ugu dambeeyay ee TAV ee KAP wuxuu xaqiijinayaa saxnimada PN Network ee bisha November.
Iyadoo lala xiriirinayo horumarintaan, Shabakada PE waxay soo saartay bayaanka oo ay ka kooban yihiin su'aalo kusaabsan qaddarinta shaqaalaha TAV.
Marka lagu dhawaaqo, TAV iyo IGA, oo ka shaqeyn doonta Madaarka 3 ka dib dib-u-dejinta, ayaa lagu weydiiyay inay ka jawaabaan su'aalaha soo socda ee ku saabsan qadarka shaqaalaha:
1- TAV ogeysiiska KAP ee 8 Abriil 2019 waxaa ku jira macluumaad ku dhow qandaraasyada shaqada ee shaqaalaha 3 sababtoo ah dib u dejinta 4500 Airport. Waa maxay tirada saxda ah ee aad tiraahdo "qiyaastii tirada? Immisa shaqaale ah ayaa haysta TAV?
2- Maxay tahay xaaladda ugu dambeysa ee ku saabsan dhammaan xuquuqda iyo sheegashada shaqaalaha la xiro?
3- Shaqaaluhu ma yaqaanno maaddada heshiiska "en" oo la sheegay in lagu soo gabagabeeyey labada shirkadood ee shaqaalaha loo wareejiyay TAV ilaa IGA. Muxuu yahay heshiiska qodobkan? Maxay ahayd sababta loogu sharaxay shaqaalaha?
4- Miyay aragtiyaha shaqaalaha loo qabtay xaaladaha ku-meelgaarka IGA? Miyay dhammaan shaqaalaha codsadaha la wareejiyey? Ama kaliya shaqaalaha ay oggolaadeen TAV iyo IGA waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan garoonka 3?
Ma jiraa shaqaale kasta oo codsigiis la diido, inkastoo 5-IGA uu codsaday kala-guurka? Hadday saas tahay, maxaadse u diidday?
6- Miyaad shaqo kale u siisay shaqaalaha TAV ee aan haysan / aan u beddelin IGA, taas oo faa'iido u lahaan karta TAV?
7 - Miyuu mushaharka iyo xuquuqda kale ee shaqaalaha loo wareejiyay IGA oo ka shaqeynaysa Madaarka Atatürk isla? Ma jiraan shaqaale leh mushahar hoose? Ma jiraan wax xayiraad ah oo ku saabsan xuquuqda kale ee shaqaalahan, sida socdaalka, cuntada, fasaxa, gunnada fasaxa iyo mudnaanta?
8 - Ma jiraan wax isbedel ah oo ku yimid sharaxaadda shaqada shaqaalaha ee ka beddelay TAV ilaa IGA? Ma jiraan wax shaqaale ah oo isbeddelaya oo ay tahay in ay qabtaan shaqooyin kale intii ay horey u qabteen?
Ma ka shaqeysay xalka dhibaatooyinka gaadiidka iyo dhibaatooyinka guryaha ee shaqaalaha TAV oo bilaabay inay ka shaqeeyaan garoonka 9-3? Ma haysataa wax soo jeedin ah shaqaalaha oo aan ahayn guuritaanka meelo u dhow garoonka garoonka ee Shaqay?
10- Waxaa la ogyahay in dhammaan qaybaha saamileyda ah ee ka imanaya heshiiska TAV ilaa 2021 uu dabooli doono DHMI. Intee ayaa la bixin doonaa TAV lacagaha laga helo DHMI?
Taariikhda Haydarpaşa Taariikhda La Shaaciyay (Video)
Mashruuca Izmit Tram wuxuu ka noqon doonaa bisha December
Walaac ka mid ah qadiyadda Ankara-Sivas tareenka xawaaraha sare leh
Maxaa ku dhici doona Dhismaha Cusub ee Dhismaha Malatya?
Qeybta Haydarpasa waa mid aan weli caddeyn
Çerkezköy- Qaddarka safarka tareenka
Shaqaalaha hawlgabka ee Noorway
Maaraynta Maddaarka Atatürk
Shaqaalaha qandaraaska garoonka Ataturk